"Fotoana tapa-kevitra", trano fialantsasatry ny mpisava lalana eo ambanin'ny sary fanadihadiana | JK Lien Design - Faucets ao an-dakozia tsara indrindra 2020 | Faucets an-dakozia tsara indrindra | Faucet ao an-dakozia
Home / Interior design / "Fotoana fanapahan-kevitra", trano fialantsasatry ny mpisava lalana eo ambanin'ny sary fanadihadiana | JK Lien Design
"Fotoana fanapahan-kevitra", trano fialantsasatry ny mpisava lalana eo ambanin'ny sary fanadihadiana | JK Lien Design
2021 / 08 / 13 FisokajianaInterior design 1916 0
“Tranon'ny klioban'ny mpisava lalana amin'ny fotoana voafaritra tsara”
Raha tokony esorina ny soritry ny olona ary atokisany ny tranony eo amin'ny tontolo iainany, Iwan Baan kosa dia mifantoka amin'ny fanasongadinana ny fifandraisana misy eo amin'ny maritrano sy ny olona amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny endrika fitantarana ny sary fanadihadiana miaraka amin'ny maritrano: ny fomba ifanarahan'izy ireo sy ny fitaomany azy.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, Corbusier dia nanoratra tao amin'ny Towards a New Architecture hoe: "Ny mari-trano dia fampisehoana ireo sakana roa mifangaro ao amin'ny hazavana amam-pahavitrihana ary amin'ny fomba hendry." Ny maritrano sy ny sary dia miatrika ny hevitra iraisana sy ny hevitry ny habakabaka, amin'ny alàlan'ny famongorana ny hazavana sy ny aloka, amin'ny fiezahana hahatratra ny fanahin'ny filaminana, ny firaisan'ny fikasana.
Ny foto-kevitry ny "The Decisive Moment" (The Decisive Moment) nataon'ny mpaka sary frantsay Henri Cartier-Bresson dia nanamafy tamin'ny lafiny iray hafa: ny dikany voalohany amin'ny fakana sary dia mitoetra ao amin'ny hatsiaka be loatra amin'ny fotoana sy ny habakabaka. Matetika ny olona no variana amin'ny fiantraikan'ny firafitry ny firafitra noforonina vetivety.
(Ao ambadiky ny gara St. Lazare, Paris, 1932)
Raha tsy asiana fitiavana azy io ho toy ny faharavana na fanapahana endrika azy ho faniriana realista, dia noraketinay an-tsoratra fotsiny ny fomba nanamboarana ny toerana tamin'ny sary. Amin'ny fanamafisana ny endrik'ilay trano, manome ny habaka fahatsapana ara-batana izy io. Eo am-pelatanan'ny mpamorona JK Lien, klioban'ny mpisava lalana tsy miankina 670㎡ any Shanghai, Mirror View Image, dia manao labiera mamorona sy mamorona ary mitombo.
Fitaratra - Famerenana indray ny habaka eo ambanin'ny fitantarana ny maoderina
▲ Alohan'ny fanavaozana
Mino aho fa ny tanjon'ny fanarenana dia ny tsy famerenana amin'ny laoniny ny lasa.
fa ny fandikana azy indray.
Ny tsangambaton'i Louis Kang vaovao dia misaintsaina ny fomba hamerenany ireo tsangambato an-tanàna amin'ny fitaovana maoderina sy teknika maoderina ao anatin'ny tontolon'ny maoderina, saingy tsy tafiditra amin'ireo endrika kilasika. Te hahita endrika endrika an-tanàn-dehibe sy fiteny maritrano ny mpamorona hamerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny habaka, mifototra amin'ny fanajana ny tranokala ihany, ny fananganana marina sy ny antsipiriany marina hampifandray ilay trano amin'ny tanàna sy ny fotoana.
Ny valin-drihana ao amin'ny efitrano manokana dia toy ny shutter fakan-tsary, sary manjavozavo, mpanao hosodoko izay mankany amin'ny tontolo anaty be pitsiny. Ankoatry ny fanasongadinana ny fialam-boly ataon'ny tompona, manome endrika ihany koa ny hevitry ny habakabaka iray manontolo - "sary" satria iray amin'ireo singa mampiavaka ny habaka no ampiasaina manerana.
Ny trano lehibe dia misy podium oval. Ny lasa tamin'ny tranobe dia manome ny mpamorona lamba vita amin'ny lamba nosoratana sy nasiana marika, ary mivezivezy ao ny vondrona mikorontana. Amin'ny alàlan'ny fanamarinana sy fandaminana ny habaka sy ny atitany anatiny, ny mpamorona dia mampiasa zoro, fitambarana ary fiteny fitaratra efa ho cubist mba hahitana ny foto-pisainana ilaina amin'ny toetran'ny habaka amin'ny fananganana trano miorina ary ampifangaroina tsara.
Nesorina tamin'ny tontolo tena izy, ilay mpamorona dia toy ny mpaka sary an-tsary cubist, mampiasa ny habaka sarotra ho fanoharana amin'ny fitoeran-tsary, mamoaka ny fanamarihana ambany pejy momba ny sivilizasiôna, momba ny sary sy ny fotoana. Ny velarantany fananganana manontolo ny tetikasa dia 670 metatra toradroa, ny rihana voalohany dia ny efitrano fandraisana, faritra fisotroana rano, efitrano tsy miankina ary studio studio; ny rihana faharoa dia ny faritra misy ny birao.
Ny singa taloha sy vaovao amin'ny trano dia mifandanja, ary ny mpamorona dia manandrana miaro sy mamerina amin'ny laoniny ny fehezan-dalàna eo amin'ny sehatry ny habaka. Ity dia nofariparitan'i Vittorio Gregotti tsara: "Famaranana, fananana, maha-izy azy ary famaritana manokana. Ireo teny rehetra ireo dia mihevitra - na niova izy ireo na tsia - fa ny tontolo efa nisy dia tokony harovana, tokony hitahiry ny fahatsiarovana ny fanamboarany azy manokana amin'ny fitehirizana ny soritry ny vatany. ”
Photography - ny fakana aingam-panahy amin'ny fotoana voafaritra
Ny antsipirian'ny maritrano, ny jiro mandehandeha eny aminy
Ny fahatsapana ny volon-koditra aorian'ny fanesorana ny loko
Amin'ny vanim-potoanan'ny fakantsary nomerika, izay haingana kokoa ny shutter noho ny mieritreritra, ny fotoana majia amin'ny famolavolana, ny fanitsiana ary ny fanitarana ny fakantsary sarimihetsika ho fahatsiarovana an-tsary ao amin'ny efitrano maizina. Ny mpamorona dia mandray aingam-panahy avy amin'izany ary manitatra ny singa "efitrano maizina" mankany amin'ny habakabaka. Ao anatin'ny tontolon'ny fitaratry ny phantom, ny fitaovana, sary sokitra ary sary hosodoko dia manampy sary kely amin'ny fotoana voafaritra: ny fitantarana manjavozavo an'ny jiro mena sy ny aloka dia mifamatotra amin'ny hetsika mpifindra monina, mamongotra ny fetran'ny habakabaka. Misotro ny rano ao amin'ny fisotroana, mampiharihary ny habakabaka ary misy fahatsapana miafina mitsingevana.
“Mahagaga ity fahatsapana ity, ny fisamborana ilay sary vetivety aorian'ny fahatsiarovan'ny fahatsiarovan-tena tsimoramora amin'ny alàlan'ny efitrano maizina. Ny fotoana nanindriako ny vavam-baravarankely dia miseho indray ny fotoana fitsambikinana. Rehefa mijoro eny amin'ny habakabaka ny olona iray dia manjavona ny fahatsapana fotoana ary miverina tsianjery ny fahatsiarovana. ” - hoy ny mpamorona JK Lien
Tamin'ny 1827, rehefa napetrak'i Niepce ny takelaka metaly nopetahany asfalta tao anaty boaty maizina ary niatrika ny varavarankely ny solomaso. Taorian'ny fivoahana nandritra ny adiny valo sy ny fivelaran'ny solika lavender dia nanjary hita ihany ny sary voalohany nalain'ny olona. Rehefa miova ny tantara, ny maritrano, ny olona, ​​ny habaka ary ny fotoana dia manangana resonance efatra-refy. Ary ho an'ny sary an-tsehatra, ny fomba hanehoana ny fifandraisana efatra-dimensional amin'ny sary roa dia nanomboka nanjary nifantoka.
Walter Benjamin dia nanoratra tao amin'ny A Short History of Photography, "Ny sangan'asa, sary sokitra, ary indrindra ny maritrano, dia mora azo kokoa amin'ny fijerena ny fanaovana kopia sary fa tsy ny fizahana zavatra ara-nofo." Izany dia mifanojo amin'ny hevitr'i Bresson momba ny fanehoana ny fahaizan'ny sary maka sary maritrano amin'ny fanjakana iray manokana ao anatin'ny 'fotoana voafaritra'. Ny mpamorona dia maniry ny hanamboatra fotoana marina ara-potoana, hahitana ny fotoana tsy manam-paharoa sy kisendrasendra ao amin'ny maritrano isan'andro. Ny rivo-piainana, ny hazavana, ny fametrahana azy, ny refy, ny fitaovana, ireo rehetra ireo dia angonina ary ekena tsirairay.
Fotoana sy habaka
Fotoana - ny fananganana fahatsiarovana eo ambanin'ny tsy fahazoana antoka
–Ny ora sy ny habakabaka
Raha ny fahitana ny refin'ny fotoana dia fotoana fohy monja ny vanim-potoana iray
Fa ny zavatra faran'izay kely indrindra dia mifandray akaiky
Ao anatin'ny tadion'ny fiandrasana ny famolavolana ilay horonantsary, mivelatra ny fotoana, miaraka amin'ny mistery sy fanantenana. Na dia tsy azo atao tanjona tanteraka aza ny fakana sary, toy ny endrika fanehoan-kevitra rehetra eto amin'izao tontolo izao, dia tsy azo lavina fa endrika fahatsiarovana akaiky indrindra ary manambara bebe kokoa ny lafiny azo antoka amin'ny lohahevitra: ny seho rehetra dia toa ivelan'ny zava-misy, kanefa ireo singa izay mandrafitra azy dia fahitana mahazatra - beton, vy, hoditra - lasa marika fahitana mangina eto daholo. Tonga marika famantarana fahanginana izy rehetra.
“Ny toerana dia tsy voafaritra raha tsy miresaka fotoana.
Tsy misy famaritana fotoana koa raha tsy misy toerana malalaka. ”
Rehefa mifindra avy amin'ny tontolon'ny vatana ny tontolon'ny fahatsiarovan-tena, amin'ny phenomenology avy amin'ny "fisiana tokana" an'i Heidegger mankany amin'ny "fahatsapana marobe" an'i Merleau-Ponty. Ny foto-kevitry ny habakabaka dia manjary manjavozavo ary mihalava ny refin'ny fotoana. Mitokana, mihidy ary tapaka amin'ny tontolo ivelany, ny trano dia toy ny efitrano maizina lehibe, ary ny fitaovana dia toy ny reagents simika. Ny mpamorona dia mampiasa ny teknikan'ny fakana sary hifantoka amin'ny fitaterana ny fahatsiarovana fotoana amin'ny fiandrasana ela. Ity fizotry ny famolavolana ity dia ny fizotry ny fifindran'ny maritrano avy amin'ny habakabaka.
Fotoana fakana sary misy dikany mahazatra. Ny atiny holazaina dia voafantina amin'ny habaka iray ary ampiarahina amin'ny alàlan'ny fitaovana ara-batana, mamorona sary kanto miaraka amin'ny fisehoana ara-panahy lavorary sy dikany tena ilaina. Ao amin'ny reniranon'ny tantara sy ankehitriny, ho an'ireo izay miaina ny habaka, dia afaka manana fifanakalozan-kevitra miakanjo tena sy manao mpisava lalana miaraka amin'ireo sary izy ireo amin'ny fotoana rehetra.
▲ Sary axonometrika
Anaran'ny tetikasa: Club Mirror Image Private
Drafitra haingo mafy: Da Guan - Zicheng International Space Design
Famolavolana fanaka malefaka: Volavola firavaka iraisam-pirenena amin'ny Grand View-MaoYue
Tale famolavolana: JK Lien
Toerana misy ny tetikasa: Shanghai
Daty famaranana: 2021
Faritra famolavolana: 670㎡
Mpaka sary: ​​Sui Sicong
Mpanorina sy talen'ny famoronana Da Guan-Self-Contain International Space Design, mpanorina sy talen'ny famoronana Da Guan-Mao Yue International Decoration Design, Master of Design Management avy amin'ny De Montfort University, UK, ary filoha mpanorina ny Heart + Design School. Mino izy fa “Ny fiainana dia vina, faniriana, nofinofy.” JK Lien, mpamorona endrika iray avy any Taipei, Taiwan, Sina, nahazo diplaoma tamin'ny Ma Design Management, De Montfort University, UK, ary nanangana an'i Da Guan tamin'ny taona 1999 tao Shanghai. Nanangana ny Da Guan International Space Design tamin'ny taona 1999 tao Shanghai izy. Andriamatoa Lien dia mpamorona endrika iray avy any Taipei, Taiwan, Sina.
Ny endrik'Andriamatoa Lian dia mifantoka amin'ny ELITE, ARCHITECTURE, ARTISTIC ary CUSTOMIZATION, manasongadina ny fampifangaroana tanteraka ny kolontsaina sy ny kalitao, ary ny fanentanana ny fihetsika tsara kokoa amin'ny famolavolana fiainana. Hatramin'ny nananganana azy dia nametraka laza tsara izy tao amin'ny hotely kintana dimy, trano lafo vidy, klioba, trano modely, foiben'ny orinasa, habaka ara-barotra, sns.
Previous :: Trano tsara tarehy 90 metatra toradroa Trano tsara tarehy, Toetra voajanahary Retro Mahafinaritra loatra | Famolavolana maharitra Next: Fananganana, Toerana malalaka an'ny fahalalahana sy ny herisetra
2021 / 08 / 15 2077
2021 / 08 / 14 2229
2021 / 08 / 14 2590